Marka laga soo tago Hazard, Real Madrid oo midkanna ka dooneysa Chelsea – Gool FM
Marka laga soo tago Hazard, Real Madrid oo midkanna ka dooneysa Chelsea
(Madrid) 09 Abriil 2017. Real Madrid ayaa ayaantanba ku raad joogtay Eden Hazard laakiin war sidaha Le 10 Sport ee dalka Faransiiska ayaa qoraya in muruq waynta Spain ay sidoo kale isha ku hayaan madaalaha Chelsea ee N’Golo Kante.
Khubaro badan oo ka falanqeysa Premier League ayaa Kante u aragta inuu sanadkan ku guuleysan karo laacibka sanadka ee horyaalka Ingiriiska kaddib markii uu qarka u saaray Blues inay gacanta ku dhigto markii 5-aad PL.
Waxay u muuqataa in qaab ciyaareedka wacan uu ku jiro Kante ay iminka soo qabatay indhaha tababare Zidane, kaa oo dib u habeyn ku sameyn kara shaxdiisa.
James Rodriguez iyo Isco ayaa la soo hadal qaaday inay xagaaga ka tagi doonaan Los Blancos, laakiin muhaliga soo baxay baryahan ee Casemiro ayaa ku dhiiro galinaya Zidane inuu la soo wareego xiddigo kale oo qadka dhexe ee daafaca si ay saddexda weerarka u weerartamaan iyagoon wax cabsi ah ka qabin gadaashooda.
Waxaa la aaminsan yahay in Real Madrid ay u soo bandhigi doonto Kante adduun dhan 50-milyan waa adduun 20-milyan dheer intii ay Chelsea ku soo iibsatay.
Laakiin waxaa hubaal ah in Antonio Conte uu ku dagaalami doono sidii uu u xafidan lahaa madaalihiisa maadaama ay kooxda reer London dib u ciyaari doonto Champions League kal ciyaareedka soo socda haddii ay wax iska badelin sida ay iminka howshu ku socoto.
SS LAZIO VS SSC NAPOLI: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
“Aad ayaan ugu faraxsanahay Chelsea laakiin kuma faraxsani Nolosha London.”. Diego Costa